Isitudiyo sePantanha - I-Airbnb
Vale de Medeiros, Viseu, Portugal
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguTrip2Portugal
UTrip2Portugal unezimvo eziyi-579 zezinye iindawo.
UTrip2Portugal ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Yiza ukonwabele iholide epholileyo kwaye ukonwabele ukujonga ubuphakathi beli lizwe lihle! Ngekhitshi elixhotyisiweyo, umoya opholileyo kunye neembono zeSerra da Estrela, le yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka indlela kwaye wonwabele okona kulungileyo indalo inokukunika!
Ifakwe kwithafa laseBeirão elibanzi kunye neekhilomitha ezingama-45 ukusuka kwipaki yesizwe yaseSerra da Estrela, eli gumbi lipholileyo liya kukuvumela ukuba ulale ngendlela ekhethekileyo kwaye uphumle kwindawo ekhethekileyo yasemaphandleni. Ungaya ngokulula kwisixeko esithandekayo saseViseu, esikumgama nje oyi-25km okanye ukuya eSpain (115km).
Indawo yokuhlala, eyinxalenye yehotele eyodwa, ikwilali entle yaseCaldas da Felgueira (Nelas), indawo yokunqumla kuNdlela 2 weDão Wine Routes ezidumileyo. Ingingqi yase Dão Demarcated inika umgangatho kunye neempawu ezahlukileyo kwiiwayini kwaye sisalathiso seyona nto yenziwa ngcono ePortugal. Kuba ukufumana izidiliya, iifama kunye neendawo zewayini kukuva amabali kwaye utyebe ngokungenasiphelo!
Thatha ithuba lokuhlala kwakho ukuze uhambe intaba kunye neendlela, ukonwabele ipikiniki ukonwabela umlambo iMondego okanye uhlaziye umzimba nengqondo yakho kwindawo yespa yaseCaldas da Figueira, emalunga neemitha ezingama-50 ukusuka kwigumbi lokuhlala. KwiiBhafu eziThermal uya kufumana umhlaba omangalisayo kunye nembonakalo entle.
Le ndlu ixhotyiswe ngazo zonke izinto eziyimfuneko ukuze uziphekele ukutya, ikunika ukuzimela kunye nokhuseleko kwiholide yakho. Ungasonwabela isidlo sakusasa selizwekazi kwaye iqula lokuqubha langaphandle liyafumaneka ukonwabela ezona ntsuku zishushu. I-aparthotel nayo inendawo yokupaka yasimahla.
Ukuba ujonge indawo yokutyela, yazi ukuba eNelas uya kufumana izitya ezimnandi kwindawo yokutyela iBem-haja.
5 km - Nelas kunye Canas de Senhorim
17 km - eMangualde
Iikhilomitha ezingama-20-Oliveira do Hospital
55 km - Serra da Estrela (iNqaba)
Umbuki zindwendwe ngu- Trip2Portugal
We are a national company that aims at the development of residential tourism on short and medium terms as a growth factor of the world economy.
Founded by two executive directors, with complementary expertise in commercial, financial, administrative areas, the tourism and marketing sector, they took this challenge as a result of their personal experience in promoting and renting their own properties, which combined with their professional know-how brings a unique ability to leverage the residential rental market for tourism.
Founded by two executive direc…
Inombolo yomthetho: RNT544